I-Pack Pack evela kwi-Acetate yeSodium
Kukho iindlela ezimbalwa ezahlukeneyo ongazenza ngayo ipakethe yakho yokubandayo. Unokuxuba i- citric acid kunye ne-sodium bicarbonate okanye udibanise i- hydroumide ye-barium kunye netyuwa ye-ammonium . Ukuba une-baking soda kunye neviniga, unokwenza icebo lakho elifudumeleyo okanye i-acetate ye-sodium uze usebenzise i-ice elishisayo ukwenza ipakethe ebandayo. Le ndlela ifanelekile kuba i-acetate ye-sodium ikhiqiza inani elibonakalayo lokushisa.
Ukuqhaqhazela i-hot e-hot emva koko ubambe ubushushu, ngoko ungasebenzisa ikhemikhali efanayo ukwenza ipakthi eshushu kunye ne-pack pack. Nantsi konke okufuneka ukwenze:
I-Ice Cold Pack
isikhwama seplastiki nge-zipper
Iqhwa elifudumeleyo kufuneka libe yi-acidium ye-acetate ye-trihydrate, eyona iqhwa elitshisiweyo elitshisa amanzi emva kokuyityhila. Ukuba unayo i-acetate ye-sodium enomileyo kufuneka uyichithe kwisamba esincinci samanzi uze uyidibanise.
Ngoku, faka nje iqhwa lakho elitshisayo kwi-baggie uze ungeze umthamo omncinci wamanzi. Kulapho uhamba ... ipakethi yomshushu nje! Impendulo ayifumanekanga kakhulu (malunga ne-9-10 ° C kuphela), kodwa yanele ngokwaneleyo, kunye neekhemikhali zisetyenziselwa kwakhona.
Indlela yokwenza i-Dry Ice Balloon
Indlela yokwenza iConicant Container
Indlela yokwenza i-Crystal In-Dark-Alum Crystals
Iindlela 5 zokwenza i-Glue
10 I-Cool Chemistry Imiboniso yoTitshala
Ingakanani Imfuneko yokuFunda i-Tarot?
Imfazwe Yehlabathi II: USS Alabama (BB-60)
Indlela yokudibanisa "i-Danser" (kuMdaniso)
Iimpawu zeParametri kunye neeNkcitho ezingabhalwanga kwiStatisti
Dc Ncokola - I-Biography yeqela lama-Hip Hop lamaKristu
UMTHETHO Ulinganisa ukufakwa kwamanyunivesithi aphezulu aphezulu
Kutheni iVegans Musa ukugqoka i-Silk
Indlela iNkqubo yokutyunjwa ngayo iNkundla ePhakamileyo yeeNkundla zokuSebenza
Ukukhetha iSatifikethi seMicrosoft
I-Architecture Ngaba Imemori - Izikhumbuzo eziziwayo kunye nezikhumbuzo
Ukuguqulwa kweMelika: iGosa eliqhelekileyo uCharles Lee
UBob Dylan kunye noMbutho weeLungelo loLuntu